EGWUREGWU MAKA NDỊ ỤLỌ NWANYỊ: NYOCHAA NKE NDỊ NA-EWU EWU - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
5 ntụziaka egwuregwu, ndị a ma ama n'etiti ndị ụlọ ụlọ
O mere na ihe oyiyi nke ihe ngosi kọmputa na-ejikọkarị ya na onye dị afọ iri na ụma ma ọ bụ nwa okorobịa na-agbachitere n'ụlọ mgbe ọ na-enweghị ohere ọ bụla, nke ọ na-etinye na ndị na-agba égbè, usoro na RPG n'ịntanetị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ndị inyom nke afọ dị iche iche adịghị eji egwuregwu kọmputa egwu. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọbụna ụmụ nwanyị na-ahụ maka oge ochie na-ahọrọ iji oge ntụrụndụ ha na-atụrụ ndụ ntụrụndụ na-akpali akpali, nke nwere ike ịbụ ọrụ nke ọdịdị dị iche iche.
Ụmụ nwanyị ndị na-elekọta ụlọ na n'usoro nwere ike ịrụ ọrụ abụọ-hey - egwuregwu kọmputa dị elu (ma eleghị anya ọbụna amaghị onwe ha), na ngwa ngwa nchịkọta ihe nchọgharị. Egwuregwu ndị dị aṅaa maka ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-ewere dịka ndị a ma ama na ndị a ma ama?
Egwuregwu nnukwu egwuregwu ndị nwunye na-ahọrọ
Ndụ dị iche
Avatar - ụwa nke nrọ na-emezu
Kwuo na izute
Ihe ndị a na-akpọ Pirates
Egwuregwu site na Alavar
Egwuregwu buru ibu gụnyere ọrụ a ma ama nke nnukwu ego a na-emepụta, ọ bụghị nanị maka Windows, kamakwa maka mgbakọ egwuregwu.
Sims Life Simulator na-ewu ewu na ụmụ agbọghọ nọ n'afọ ndụ niile. Egwuregwu ahụ abụghị ọrụ dị mgbagwoju anya n'ihe gbasara egwuregwu: ebe a ị nwere ike ịme ihe odide na njikwa. Ụmụ nwanyị ndị na-elekọta ihe niile ga-ejide otu onye ma ọ bụ, ma eleghị anya, otu ezinụlọ dum ịmepụta ọnọdụ ndụ dị mma: ịzụta ọtụtụ ụlọ dị jụụ, mepụta mmekọrịta na-ekpo ọkụ ma dị mma na ụwa nke ọma ma na-enwe mkpakọrịta na ndị enyi. O siri ike ikwu na otu akụkụ nke Sims bụ ihe kachasị ewu ewu! Ugbu a, e nwere ọtụtụ ndị na-enwe mmasị na ma ọ bụ abụọ Sims 4, ma na-egwu na Sims abụọ ochie ochie.
Maka ihe odide nke oma, ị nwere ike ịhazi ọdịdị na nkọwa kacha nta, yana ịchọta àgwà, ihe mgbaru ọsọ na mmasị ha
Maka ndị ụlọ akwụkwọ kachasị elu, ndagwurugwu Stardew dị egwu na-abịa dochie ụlọ ọrụ ugbo ala na-adịghị mma. Egwuregwu a na-enye gị ịkụ ubi gị, ịzụ anụ ụlọ gaa gaa azụ. Ihe niile yiri ka ọ dị mfe, ma echiche a dị nnọọ aghụghọ, n'ihi na mgbe ọkara otu awa nke egwuregwu, ọ ga-edo anya na Stardew Valley bụ ihe ịtụnanya akụkọ banyere ụwa na ụwa na-adọrọ adọrọ nke ị na-atụ anya n'ezie iji mee ka ndị enyi mara ọtụtụ ihe nzuzo ha. Ịhapụ ọdụ ndagwurugwu Stardi na achọghị ogologo oge, ọhụụ a ma ama nke parsnip ga-adaba n'èzí, na-eme ka ịchọọ maka onyeisi ọwa mmiri ma na-ege akụkọ akụkọ ndụ nke tramp.
Ihe kacha mkpa n'egwuregwu ahụ: onye bụ isi na-eketa ugbo ahụ, nke kwesịrị ilekọta, gbalite ma gbasaa ókèala ya
N'etiti ndị na-arụ ọrụ ụlọ, e nwere ndị na-enweghị ike iguzogide arụmọrụ na-adịghị agwụ aghara. Maka onye kachasị arụ ọrụ, enwere MOVA shooter Overwatch. Egwuregwu ahụ, nke mbụ, nwere ike ịdọrọ ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị na ya, na-adọrọ adọrọ mmasị na ọnụ ụzọ dị ala. Mgbe ahụ, ị ​​gaghị achọpụta otú i si eburu nkà ahụ ma malite ikesa headhots n'akụkụ niile, na-egwu maka Hanzo na-alaghachi azụ. Ọ bụrụ na ọkụ na-ere ọkụ n'ime mkpụrụ obi gị, agụụ na-agụkwa obi gị, jide n'aka na ị ga-anwale Overwatch!
Overwatch natara ezi nyocha site n'aka ndị nkatọ - ndị nyochaa kwuru ọtụtụ ihe odide, ihe osise ndị doro anya na egwuregwu dị ụtọ
Na-ekwu na ndị nwunye nwunye na-ahụ ihe ngosi TV. Mmiri nwere ya na ha na-etinye ọtụtụ n'ime oge ha n'efu na-ekiri ha. Otú ọ dị, ụfọdụ achọpụtala ụzọ ha ga-esi jikọta mmasị na akụkọ mkparịta ụka multi-episodic na egwuregwu kọmputa. Nke a na-enyere site na mmekọrịta mmekọrịta, nke onye ọkpụkpọ ahụ kpebiri maka isi ihe, ihe dị mkpa ka a mee na otu esi azaghachi onye na-eme ya. Ndụ dị iche - otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke ga-abata n'ime ibé ahụ. Ọrụ a nwere nnukwu arụmọrụ na ihe odide sụgharịrị atụ - a ga-ahụ ha n'anya ọbụna n'oge mbụ. Ọbụna ụfọdụ nwere ike ịkpọ egwuregwu egwuregwu a, ma n'etiti ndị na-akwado Sloy Enix, e nwere ụmụ okorobịa ole na ole nwere ekele maka omimi na mkpali nke akụkọ banyere nwa agbọghọ Maxine, onye maara otú e si ejikwa oge.
A na-ewere uru dị ukwuu nke egwuregwu ahụ dị ka nkọwa nke ọnọdụ na njupụta nke ụwa, nakwa dị ka ọtụtụ ihe na-ezo aka ọrụ ndị dị adị na ihe atụ nke omenala a ma ama.
O doro anya na onye ọ bụla nọ n'oge ọ bụ nwata tụrụ anya na ọ ga-ewu obodo nke ya, ebe ihe ọ bụla ga-arụ ọrụ ọ chọrọ. Obodo: egwuregwu egwuregwu Skylines na-enye gị ohere ịchọta onyeisi obodo ma wuo nnukwu obodo gị. Ọ bụ ezie na, ma eleghị anya, ọ gaghị abụ obodo ukwu, ma obere obodo nwere àgwà mara mma na ikuku dị ọcha, ebe e nwere ebe maka ọtụtụ ubi na ala mara mma. Naanị ị kpebie! Egwuregwu ahụ na-enye ọtụtụ ohere maka nlekọta, n'ihi na ndị na-agba chaa chaa ga-eche echiche banyere inye ndị bi n'obodo ha ọrụ, banyere ịhapụ ngwaahịa na ụlọ ahịa na ịhazi njem ọha na eze!
Onye ọkpụkpọ ahụ na-etinye aka na mpaghara mmepe atụmatụ, ịkwado okporo ụzọ, ịtụ ụtụ, ịhazi ọrụ nke obodo na njem ọha na eze, ọ dị mkpa ka ọ nọgide na-emefu ego nke obodo, ọnụ ọgụgụ, ahụike, obi ụtọ, ọrụ nke ndị bi na mmetọ gburugburu ebe obibi
Ngwa ndị a na-ewu ewu n'etiti ndị na-arụ ọrụ ụlọ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịkpọ ha na kọmputa ma ọ bụ mbadamba. Ha adịghị achọ ka echichi mmemme ndị ọzọ - isi ihe bụ ichefu ịkwụ ụgwọ maka Intanet!
Ihe nchọgharị na-akpali akpali nke egwuregwu Avatar ga-enye ndị egwuregwu ịbanye n'ime ndụ dị mma. Ee, ndị ọbịa na ngwa a ga-emepụta "M" nke abụọ ha ịghọ akụkụ nke ụwa buru ibu ma na-adọrọ mmasị. N'ebe a ị nwere ike izute, nkata, gbanwee uwe, kwadebe ụlọ gị na ọbụna ịlụ di! Egwuregwu ahụ zuru okè maka ndị na-achọ ndị enyi na mkparịta ụka na-atọ ọchị!
Ihe omuma na ọrụ, oge ntụrụndụ na nkwurịta okwu, mmepe nkà na ịga nke ọma na mpaghara a họọrọ maka ndị na-egwu egwu Avatar; ọzọ, ị nwere ike ịnwale ịnweta jackpot
Ihe gbasara VKontakte dị egwu ga-amasị ndị maara ihe egwuregwu egwuregwu. N'ebe a ị nwere ike inwe oge na-enweghị oge, chọta ndị enyi ọhụrụ na ọbụna izute ịhụnanya gị! Onye ọ bụla nọ na tebụl buru ibu nwere ike igosi ọmịiko maka onye ọkpụkpọ ọzọ. Onye maara ihe mmalite nke nkwurịta okwu ga-eduga.
Netwọk mmekọrịta na-agbaso iwu ndị a na-ahụ maka egwu na-egwu egwu: ị nwere ike ịkwụsị nsusu ọnụ ma ọ bụ mezuo ọchịchọ, ị nwere ike ịgbanye egwu kachasị amasị gị maka onye ọ bụla, ma ọ bụ nye onyinye dị mma, ma dee ozi onye ị chọrọ.
E kwesịghị iduhie akụ ndị Pirates site n'aha ha. Tupu anyị abughi ihe egwuregwu na-adọrọ mmasị, ma egwuregwu dị mfe site na usoro "atọ na eserese". Maka ihe kpatara ya, ndị na-ahụ n'anya na-enwe mmasị na netwọk mmekọrịta mmadụ. Egwuregwu a maara n'ezie otú e si iju anya ma na-enyekarị ndị ọrụ gamers ọrụ siri ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ imebi obi gị ngwa ngwa, mgbe ahụ, Pirate Treasure bụ ihe ị chọrọ!
Ihe ndị na-emepụta Pirates bụ ụdị nke mgbagwoju anya nke ị nwere ike ijide onwe gị n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla; ha anaghị achọ mmeghachi omume pụrụ iche, na-arụ ọrụ egwu egwu ma ọ bụ aka abụọ iji chịkwaa
Oge Ochie "Ugbo Ama Na-ahọrọ Ama" adịbeghị anya ndị inyom. Nye ha ọhụrụ gameplay na-akpali echiche! Ndị na-emepụta egwuregwu Nano-ugbo na-achọta ha! Echiche nke oge a banyere usoro ihe eji eme ihe n'oge ochie emewo ka ihe nchọgharị ahụ dị ịrịba ama n'etiti ndị ọrụ VKontakte. Nano-ugbo nwere ihe karịrị nde mmadụ asaa n'ụwa nile, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ agbọghọ.
Ihe kacha mkpa n'egwuregwu ahụ bụ ịkụ ụdị akwụkwọ nri ọ bụla, mkpụrụ osisi na-eto eto, a na-ewepụta mmelite ndị a na-atụghị anya ha ma dịgasị iche kwa izu.
Ọtụtụ mgbe, obere egwuregwu bụ nhọrọ nhọrọ desktọọpụ. Dị ka a na-achị, mmemme ndị a nwere onwe ha, enwere ike itinye ha na kọmpụta site na ndabara. Ndị a na-agụnye ndị na-elegharị anya, chess, backgammon, solitaire.
Iji oge ntụrụndụ maka solitaire hụrụ ndị na-enweghị oge maka ntụrụndụ ndị ọzọ. Ịgbasa otu ma ọ bụ abụọ batrị na "Solitaire" ma ọ bụ "Spider" na ihe kachasị mgbagwoju anya - ahụmahụ na-akpali akpali. Nne na nna egwuregwu dị otú ahụ na-adọta mfe nke egwuregwu, ike nke mmepe na enweghi nbudata ọ bụla: otu pịa mkpado ahụ, usoro ahụ na-atọ ụtọ amalitela!
Ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu kweere na ụlọ mkpọrọ a ma ama nke Bastille ghọrọ ebe a mụrụ nke egwuregwu solitaire, ebe ndị mkpọrọ na ndị mkpọrọ nwere utu aha ọma abụghị ịgba chaa chaa, ma aka ha setịpụrụ na kaadị ahụ, ya mere e kere usoro ndị chọrọ ndidi - nke a bụ okwu ahụ kpọmkwem ụda nke ụda dị ka solitaire
Ihe oru sitere na Alavar dị mfe, na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị. Studio bụ otu n'ime ihe egwuregwu Russia ole na ole na-amalite obere egwuregwu na egwuregwu maka kọmputa nke onwe na smartphones. Otu n'ime ọrụ kachasị mma dị ka "Jolly Farm" a ma ama, "Masyanya", "ruo ụbọchị 80 gburugburu ụwa" na ndị ọzọ.
Na egwuregwu Alavar, ọrụ dịgasị iche agaghị ekwe ka ị gwụrụ, ndị enyi ga-abịa mgbe niile.
Otu n'ime egwuregwu kachasị ike maka kọmputa onwe onye bụ quests. Nke bụ eziokwu, ọbụlagodi na ha dị iche iche, e nwere ọrụ ndị a na-enweghị nchebe ebe ndị egwuregwu ga-achọ ihe dị na ihuenyo na ihe ngosi iji nwee ike ịga n'ihu ebe ọzọ ma ọ bụ mezue ọrụ ụfọdụ. Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ụlọ akwụkwọ bụ usoro Nancy Drew, nke dabeere na akụkọ Caroline Keane. Egwuregwu na-enye nyochaa mpụ, na-achọ ihe ngosi na ebe na-eji ha eme ihe megide ndị na-enyo enyo.
Nancy Drew na-ewu ewu ọ bụghị nanị n'etiti ndị hụrụ akwụkwọ - usoro egwuregwu banyere nwa agbọghọ na-ahụ maka nwata na-achọpụta ihe emeriwo obi nke ọtụtụ ndị na-achọgharị ịhụnanya n'ụwa nile.
Otu n'ime ihe kachasị dị egwu nke egwuregwu na PC, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọdịiche dị egwu site na egwuregwu dị egwu, mana enwere ike ịkawanye nke ọma na ruo ogologo oge. Ndị na-egwu egwu adịghị mkpa iji usoro aghụghọ na nkà jikọtara ọnụ iji nweta ihe kacha mma. Clickers na clickers na-arụ ọrụ site na ịpị bọtịnụ òké. Ọ bụ ya mere ndị na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ na-ahọrọ iji nweta ọkwa ọhụrụ na egwuregwu ndị a na-adọrọ mmasị ma melite arụmọrụ akụkọ. Shakes na Fidget, Clicker Farmer, Cookie Clicker na Epic Creature Hunter guzo n'etiti kacha mma.
Clickers bụ ụdị ọhụrụ nke egwuregwu ịntanetị ga-enyere aka belata esemokwu ma tinye oge na obi ụtọ.
Ndị nne na nna maara ọtụtụ ihe banyere ntụrụndụ kọmputa! Ụfọdụ n'ime egwuregwu ndị inyom a họọrọ nwere ike ịju anya ma kwụsị oge ruo ọtụtụ awa. Kedu ihe ụlọ gị na-egwuri egwu, nke nwere ike ịgụnye nne gị, nne nne gị, ụmụnne gị nwanyị na enyi nwanyị gị? Dee azịza ha n'ihe ndị a na-ekwu ma kọọ egwuregwu ndị ha jikọtara gị!